शुक्रबारको राशिफल : यस्तो छ तपाईंको २४ घण्टा – सजल सन्देश
शुक्रबारको राशिफल : यस्तो छ तपाईंको २४ घण्टा
By Sajal sandesh	 On२ माघ २०७६, बिहीबार १५:२१
२०७६ साल माघ ३ गते शुक्रबार । ज्योतिष शा’स्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवा णी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ?
अरिंगालका गोलाहरुको त मुटु होला नी !
यसरी दाऊद काठमाडौंबाट भारतमा न क्कली नोट पठाउँछन् !